पुराना कामको चर्चा हुनेछ भने नयाँ काममा प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग सहकार्य गर्ने अवसर जुट्नेछ । विशेष भेटघाटले उत्साह जगाउनेछ । मिहिनेतले नाम, दाम र इनाम दिलाउन सक्छ। तारिफयोग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सकिनेछ । सामाजिक जिम्मेवारी प्राप्त हुनुका साथै आफ्नो वर्ग वा क्षेत्रको नेतृत्व पनि हातलागी हुने समय छ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुन सक्छ ।
उपलब्धिका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला । कामको चाप बढ्नेछ भने शरीरमा कमजोरी अनुभूति हुनेछ । सोचेको उपलब्धि तत्काल नपाइएला। सहयोगको तत्परता देखाउनेहरू पछि हट्नेछन् । शुभचिन्तकसमेत प्रतिपक्षीको प्रभावमा आउन सक्छन् । आफ्ना सूचना बाहिरिने समय रहेकाले गोपनीयतामा ध्यान पुर्याउनुहोला । केही विवादास्पद जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।
हाँसखेल र मनोरञ्जनको समय छ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ । आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनेछ । भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । व्यवसायको सन्दर्भमा यात्रा हुन सक्छ। काममा साथीभाइको सहयोग जुट्नाले उत्साह मिल्नेछ । दिगो काम थाल्ने समय छ ।
भौतिक साधन जुट्नाले दिन उत्साहजनक रहनेछ । दिगो फाइदा हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपरे पनि प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ। मेहनत गर्दा प्रतिस्पर्धाको दौडमा अग्रस्थान हासिल हुनेछ । नयाँ योजना शुभारम्भ गर्ने समय छ । पहिलेको उपलब्धिलाई थप उचाइमा पुर्याउन सकिनेछ । शत्रुता साध्नेहरू स्वयं कमजोर हुनेछन् । हिम्मतले काम लिँदा फाइदा हुनेछ ।
चिताएको काम बन्नाले लक्ष्य प्राप्ति हुनेछ । लगनशीलताले राम्रै उपलब्धि दिलाउनेछ । अध्ययनमा प्रगति हुनेछ । फाइदाको स्रोत पहिल्याउन सकिनेछ। सेवामूलक काम गर्दै नाम, दाम र इनाम हातपार्न सकिनेछ । शुभचिन्तकहरूले काममा साथ दिनेछन् । बौद्धिक प्रतिस्पर्धामा विजयी भइनेछ । प्रयत्न गर्दा दिगो लाभ हुने काम प्रारम्भ हुनेछ । आँटेका काममा सन्तान र अनुयायीको सहयोग जुट्नेछ ।
परिस्थितिअनुसार निर्णय लिन नसक्दा काम दोहोर्याउनुपर्ने हुन सक्छ । महत्त्वाकांक्षी योजना कार्यान्वयनमा आफ्नैले बाधा पुर्याउन सक्छन् । हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग हुन सक्छ । बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउन सक्छ । महत्त्वपूर्ण योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला । अनावश्यक साइनो गाँसी नजिकिन खोज्नेहरूसँग अलि सावधान रहनुहोला ।
नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ । मिहिनेतले दिगो फाइदा दिलाउनेछ । दाजुभाइमा आत्मीयता बढ्नेछ भने प्रेम र मित्रताको बन्धनसमेत कसिलो हुनेछ । पहिलेको उपलब्धिले पनि उत्साह जगाउनेछ । सहयोगीहरू जुट्नाले चिताएका काम सम्पादन हुनेछन् । उद्योग र व्यापारमा विशेष फाइदा हुनेछ। गरिएका कर्मको उचित प्रतिफल प्राप्त हुनेछ । थोरै लगानीबाट पनि नाफा कमाउन सकिनेछ ।
आलोचकहरूबाट जोगिएर काम लिनुपर्ने समय छ । वादविवादमा अघि नसर्नुहोला । काम पूरा नभए पनि मिहिनेतले लाभ दिलाउनेछ । चिताएको मूल्य प्राप्त नभए पनि पछिलाई फाइदा हुने काम हातपार्न सकिनेछ । पहिलेका कमजोरीलाई सुधार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले धन आर्जन हुनेछ । नियमित काम सम्पादन हुनेछन् । नयाँ कामका लागि केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला ।
साथीभाइको आगमनले दिन मनोरञ्जनपूर्ण हुनेछ । रमाइलो जमघट एवं भोजभतेरको अवसर प्राप्त हुनेछ । तर, आगन्तुकले व्यर्थैमा अलमल्याउन सक्छन्। समयमा सजग नहुँदा फाइदा लिने अवसर पछिलाई धकेलिन सक्छ । खानपानको सोखले स्वास्थ्य पनि प्रतिकूल बन्ने देखिन्छ । अवसर प्राप्त भए पनि चुनौतीसँग जुध्नुपर्ने समय छ । मिहिनेत गर्दा सफलताको उचाइ प्राप्त गर्न पनि सकिनेछ ।
भैपरी आउने खर्चले चिन्ता बढाउन सक्छ । आफन्त र परिवारजनबाट टाढिनुपर्ला । करकापमा परी बाध्यात्मक काम वा विशेष निर्णय गर्नुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ । प्रलोभन देखाउनेहरूले फसाउन सक्छन् । दिगो योजनाका लागि ऋण लिनुपर्ने आवश्यकता पर्न सक्छ । अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ला । आफ्ना कमजोरीबाट लाभ उठाउनेहरू सक्रिय हुने हुँदा सावधान रहनुहोला ।
मीन -दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
धेरै आम्दानी नभए पनि उठ्नुपर्ने रकम हातलागी हुनेछ । तर, हातलागी भएको रकम अरूका लागि खर्च हुन सक्छ । पछिका लागि लगानी गर्नुपर्ला । सञ्चित धन उपयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ । श्रमको उचित मूल्यांकन भए पनि तत्काल सोचेको मूल्य भने प्राप्त नहुन सक्छ । आवश्यकता भन्दा सोख पूरा गर्न बढी खर्च हुनेछ । खर्च टार्न केही सरसापट लिनुपर्ने हुन सक्छ । तापनि, आयस्रोत बढाउने समय छ ।
वि.सं. २०७७ मंसिर ५ शुक्रवार( इ.स. २०२० नोभेम्बर २०)